Ny toeran-nofinofy any Thailand sy Bhutan dia mandray hotely dusitD2 vaovao
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny toeran-nofinofy any Thailand sy Bhutan dia mandray hotely dusitD2 vaovao
Dusit International, iray amin'ireo orinasam-pampandrosoana hotely sy fananan-tany malaza any Thailandy, dia nanohy ny fanitarana azy tamin'ny alàlan'ny fanokafana moramora ny trano fandraisam-bahiny roa eo ambanin'ny marika dusitD2 ambony - dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan ary dusitD2 Ao Nang, Krabi (Thailand).
Nosokafana tamin'ny 15 Desambra 2018, dusitD2 Ao Nang, Krabi dia mametraka ny vahiny lavitra ny fitsangantsanganana amoron-dranomasina sy ireo manintona lehibe hafa ao amin'ity tanàna amoron-dranomasina malaza ity, any atsimon'i Thailand.
Nisokatra tamin'ny 19 Desambra 2018, mandritra izany fotoana izany, ny dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan dia hotely voalohany sy lehibe indrindra misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao amin'ny fanjakana manintona. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny Four Harmonious Friends, tantaram-pirenena malala iray momba ny biby efatra miara-miasa hijinja voankazo avy amin'ny hazo majika, ny vahiny tsirairay ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia natokana ho an'ny biby hafa avy amin'ilay angano. Ny endriny miloko sy ankehitriny an'ny zavaboary dia miravaka ny rindrin'ny tsirairay amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny 83 voalahatra.
Ankoatry ny lobby tsara tarehy mampiseho ireo zavakanto eo an-toerana, ny fanolorana hotely amin'izao fotoana izao dia misy spa Thai, gym iray feno fitaovana ary trano fisakafoanana fisakafoanana tontolo andro. Hanara-dia tsy ho ela ny fisotroana misy aina sy ny trano fisakafoanana Thai marina eto Bhutan.
Ireo toerana manintona malaza toa an'i Buddha Point (Kuensel-Phodrang), ilay Tashichho Dzong malaza, Royal Botanical Park, ary Clock Tower Square dia mora idirana avy amin'ny toerana misy ny tanàna ao an-tanàna ao amin'ny renivohitry ny fanjakana, Thimphu.
"Natao hisaintsainana sy haminavina ny filàna sy ny filan'ny mpivezivezy mifandray be izao, ny trano fandraisam-bahiny dusitD2 dia ahitana fitambarana fampiononana, fahamoranana ary fomba fanao, mamorona toerana misimisy ho an'ny vahiny hifaneraserana sy hifaneraserana," hoy Andriamatoa Lim Boon Kwee, Chief Operating Manamboninahitra, Dusit International. "Faly izahay mandray ny dusitD2 Yarkay Thimphu, Bhutan ary dusitD2 Ao Nang, Krabi ao amin'ny portfolio-n'ny hotely manerantany izay mitombo haingana, ary manantena ny hamalifaly vahiny izahay miaraka amin'ny marika tsy manam-paharoa fandraisana vahiny."
Qatar Airways dia manidina mankany Da Nang, Vietnam
Nanambara ny tsiro ny mpandresy Dominica